गुल्मी सहित ४५ जिल्लामा मतदान सुरु, वामीमा ९६ वर्षिय सापकोटाले पहिलो मत खसाले ! – ebaglung.com
२०७४ मंसिर २१, बिहीबार ०८:४४	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
कमल पौडेल, गुल्मी २०७४ मंसिर २१ । गुल्मी र पर्बत सहित ४५ जिल्लामा प्रतिनिधी तथा प्रदेश सभा सदस्य पदको मतदान कार्यक्रम सुरु भएको छ ।
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ७ वामीटक्सार स्थित महेन्द्र आदर्श मावि मतदान केन्द्रमा स्थानिय ९६ वर्षिय मणिरत्न सापकोटाले पहिलो मत खसालेका छन् । सापकोटाले मत खसाले संगै मतदान प्रक्रिया शुरु भएको हो । ७ वजे नै मतदान सुरु हुने भनिएपनि विहानै परेको हल्का वर्षा तथा चिसोको कारण करिव साढे ७ वजे मतदान सुरु भएको थियो।
स्थानिय तहको मतदानमा विहानै लामो लाईन देखिने गरेपनि यसपालि भने खासै लामो लाइन वस्नु परेको छैन। विहानी समयमा मौसम चिसो भएको कारण मतदाता छिटो नआएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विहानै हल्का पानी परेपनि अहिले मौसम सफा रहेको छ। सो केन्द्रमा २३ सय ६ जना मतदाता रहेका छन्। मतदान केन्द्र वरिपरि सुरक्षा व्यवस्था कडा वनाइएको छ। बागलुङ जिल्लाको सिमानामा रहेको मुसिकोट नगरपालिकाका विभिन्न नाका सिल गरिएको छ। मतदाताहरुलाई मतदान गर्न जाँदा मोबाईल लान दिईएको छैन ।
दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको १ सय २८ र प्रदेशसभाको २ सय ५६ सिटका लागि मतदान हुन लागेको हो । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल १ सय ६५ सिट मध्ये ३७ र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको कुल ३ सय ३० सिटमध्ये ७४ सिटमा मंसिर १० गते पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
दोस्रो चरणको मतदान सकिएपछि बिहीबारबाटै पहिलो र दोस्रो चरणको मतगणना प्रारम्भ हुनेछ । पहिलो चरणमा बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ सहित ३२ जिल्लामा निर्वाचन भएको थियो ।